KACHINNEWS.COM --- Kachin News Group: March 2013
မလေးရှားရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများရဲ့ ကချင်ဒုက္ခသည် ရံပုံငွေရှာ ဈေးရောင်းပွဲတော်။
RFA Kachin Language TV Program, 2013 March 4th Week
Posted by Kachin News Group at 11:01 AM0comments
ရှမ်းမြောက် KIA စစ်သားတစ်ဦး။
Posted by Kachin News Group at 10:59 AM0comments
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာမြို့ရှိ ပညာရေးအခက်ခဲဖြစ်နေသော ဒုက္ခသည်များကို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမ္မကများ အဖွဲ့ချုပ်(ဗကသ) မှလာရောက်အကူအညီပေးကာ ဆက်လက်ကူညီနိုင်ရန်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:54 AM0comments
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို အစားအသောက် အကူညီပေးနေတဲ့ KBC အဖွဲ့။
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်ရှိ မြစ်ကြီးနား၊ မုန်နာ၊ ဝိုင်းမော် ကချင်နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန်ဖွံ့ဖြိုးရေးခြံများတွင် ခိုလှုံနေသော စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များသည် ထမင်းချက်ရန်ထင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးများ အခက်ခဲဖြစ်နေကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:47 AM0comments
Kachin-China timber trade resumes following lull in fighting
Chinese loaded log trucks headed to the Nongdao camp from Burma's Nbapa village in last week.
Hundreds of Chinese owned trucks loaded with timber have crossed from Kachin state into China over the past few weeks followingarecent lull in fighting between the Kachin Independence Organization (KIO) and government forces.
Posted by Kachin News Group at 7:02 PM0comments
လိုင်ဇာသို့ တရုတ်နှင့်ကချင် စီးပွားရေးသမားများ အလုအယက် နေရာယူလာ
လဂျားယန်မှ KIO လိုင်ဇာသို့ အဓိက အ၀င်မုဒ်ဝ
Yuzana company's factory in Hugawng Valley.
မြန်မာအစိုးတပ် (ဘယ်) နဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA)
Posted by Kachin News Group at 10:36 PM0comments
ဂျေယန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ၀မ်းရောဂါနှင့် နှာစေးချောင်းဆိုးအဖြစ်များနေ
Je Yang ဒုက္ခသည်စခန်း။
Posted by Kachin News Group at 10:32 PM0comments
ကချင်ပြည်နယ် အင်ဘာပါမှ တရုတ်နယ်စပ် နောင်တောင်း သစ်စခန်းသို့ ထွက်လာတဲ့ သစ်ကားများ။
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာနယ်စပ်နှင့် နောင်တောင်းတရုတ်နယ်စပ်မှ နေ့စဉ် သစ်ကားကြီးများသည် တိုက်ပွဲများလျှော့ကျသွားချိန် ယခုလလည်ပိုင်းမှစ၍ တရက်အတွင်း ကားအစီး ရာချီနယ်စပ်သို့ တင်ပို့နေကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 6:42 PM0comments
KIA တပ်ရင်း ၈ စစ်သားများနဲ့ ၎င်းတို့ ဖမ်းမိတဲ့ မြန်မာအစိုးရ စစ်သားတဦး။
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်ရင်း ၈ နယ်မြေတွင် ယမန်နေ့ အစိုးရတပ်များလှုပ်ရှားလာသောကြောင့် KIA စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ ၁ နာရီကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 7:19 PM0comments
Burma army continues shelling and looting Kachin state
Burma's military continued to attack Kachin Independence Organization (KIO) positions throughout Kachin and north western Shan states over the last week. This despite repeated claims from senior government officials including President Thein Sein himself that the fighting in northern Burma has finished.
Posted by Kachin News Group at 10:48 PM0comments
2013 March 3rd Week, RFA Kachin Language TV
Posted by Kachin News Group at 10:43 PM0comments
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်များကို စားနပ်ရိက္ခာများ ဝေငှပေးနေတဲ့ KBC အမှုထမ်းများ။
Posted by Kachin News Group at 3:12 PM0comments
Burma army and KIO clash in Shan state shortly after Ruili talks
Burma army troops and forces from the armed wing of the Kachin Independence Organization (KIO) clashed in northern Shan state on Wednesday, less than 36 hours after both sides met for peace talks in the Chinese border town of Ruili. Fighting took place at Man Pying near Hu Hpyet town in Kutkai township.
Posted by Kachin News Group at 3:08 PM0comments
Peace marchers reach Laiza
Peace marchers reached in KIO's capital Laiza on March 13.
A group of Kachin activists and monks marching for peace reached the Kachin Independence Organization's (KIO) defacto capital Laiza on Wednesday night. The group made up of more than 50 people from Myingyan township in Mandalay division receivedahero's welcome when they arrived in the besieged town.
Posted by Kachin News Group at 2:00 PM0comments
Ban Ki-moon urges ceasefire in Kachin state
Inastatement released Thursday, United Nations Secretary General Ban Ki-moon welcomed the progress made between Burma's government and the Kachin Independence Organization (KIO) during recent peace talks in China.
Speaking in Geneva on Monday while presenting his latest report to the UN's Human rights commission Tomas Quintana the UN's Special Rapporteur for human rights in Burma said he continues to be concerned human rights abuses in the north and west of the country.
Posted by Kachin News Group at 11:27 AM0comments
မြန်မာအစိုးရစစ်သား ၂ ဦး၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး တစ်ရက်အကြာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း KIO အောက် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေတွင် နှစ်ဖက်တပ်ကြား ၂ နာရီကြာ ပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲတခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ရေကာတာ တည်ဆောက်နေခြင်း ရပ်တန့်ရန် ဒေသခံများ တောင်းဆို။
ယနေ့ မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ကျရောက်သည့် ‘နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု အထိန်းအမှတ်နေ့’ တွင် ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ ဦးဆောင်၍ မြစ်ဆုံဒေသခံလူထုများက ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖျက်ဆီးနေသော စီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Posted by Kachin News Group at 10:51 PM0comments
Wa barred from KIO peace talks
Mar. 11-12 Ruili Talk: Burmese Lt-Gen Myint Soe (left), commander of military offensive operation in Kachin regions and KIA Vice Chief of Staff Maj-Gen Gun Maw
Posted by Kachin News Group at 11:44 AM0comments
Burma army denies Pangwa airstrikes, says helicopters were bringing exams
Lt-Gen Myint Soe, commander of Burmese government's military offensive operation in Kachin regions
Speaking on the sidelines of yesterday's peace talks in the Chinese town of Ruili, Lieutenant General Myint Soeasenior official with Burma's Defense Ministry denied allegations first reported by the Kachin News Group that jet fighters conducted airstrikes on Kachin Independence Organization (KIO) positions near Pangwa last week.
Posted by Kachin News Group at 11:39 AM0comments
Posted by Kachin News Group at 11:08 AM0comments
ကေအိုင်အို မိုင်ဂျာယန် ဒေသရှိ ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များ။
Posted by Kachin News Group at 11:14 PM0comments
Army's Kachin offensive continues despite President's claims, says KNO
Burmese soldiers guard Kachin State's capital Myitkyina.
Inastatement released on Friday the Kachin National Organization (KNO), the largest exiled Kachin political organization, strongly condemned President Thein Sein's recent claim that there is no longer any fighting in northern Burma. Throughout his European trip which also ended on Friday, Thein Sein repeated the government line that peace has come to Kachin state, despite mounting evidence to the
ပန်ဝါ၊ ချီဖွေ နှင့် လောခေါင်ဒေသတွင် အခြေစိုက်တဲ့ မြန်မာအစိုးရ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ (ယခင် NDA-K တပ်ဖွဲ့)
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်က ဂျပန်စစ်သားများ။
ဂျပန်အစိုးရမှ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေအတွင်း ကျဆုံးသွားခဲ့သော မိမိတို့ဂျပန်ရဲဘော်များ၏ ရုပ်အလောင်းကို ကူညီရှာဖွေပေးရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့ရာ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူခဲ့သည်။
Posted by Kachin News Group at 11:00 PM0comments
Burma govt and KIO to meet in China next week, as fighting and airstrikes continue
Burmese president Thein Sein (left) and KIO Chairman Lanyaw Zawng Hra
Negotiators from Burma's government and the Kachin Independence Organization (KIO) will meet at the Chinese border town of Ruili on Monday for another round of peace talks, according to Lah Nan, the KIO's chief spokesperson.
Posted by Kachin News Group at 11:03 PM0comments
ဦးလာနန်၊ ကေအိုင်အို ဒုအထွေထွေအတွင်းရေးမှုး-၂
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် အစိုးရပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း KIO ပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:57 PM0comments
မြစ်ဆုံ ရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ပြောင်းရွှေ့ခံဒေသခံများ နေရပ်ပြန်ခွင့် မရသေး
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဧရာဝတီမြစ်ဆုံပေါ် တည်ဆောက်မည့်ရေကာတာစီမံကိန်းကို နိုင်ငံတော်သမ္မတအမိန့်ဖြင့် ရပ်ဆိုင်းထားသည်မှာ တနှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်သော်လည်း စီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရသော အောင်မြင်သာစံပြကျေးရွာဒေသခံများသည် မူရင်းနေရပ်သို့ ပြန်နေထိုင်ခွင့်မရသေးကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:02 AM0comments
ရှမ်းပြည်အရှေ့မြောက်ပိုင်း KIA တပ်မဟာ ၄ တပ်ဖွဲ့များ။
မြန်မာအစိုးရတပ်သည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ ပန်ဆိုင်းဒေသသို့ စစ်လက်နက်အင်အားများနေ့စဉ် တိုးချဲ့နေခြင်းကြောင့် တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာနိုင်ကြောင်း KIA ဖက်ကသုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
Posted by Kachin News Group at 9:59 PM0comments
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် “ဇ” ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆေးဝါးလိုအပ်
တရုတ်နယ်စပ် ယာယီစစ်ပြေးစခန်းမှ ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်များ။
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့နယ် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ “ဇ” ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် အအေးမိ နှာစီးချောင်းဆိုး ဖြစ်ပွားနေပြီး အားဆေးများလိုအပ်နေကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 10:27 AM0comments
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် ချီဖွေနှင့် လောခေါင်ဇုံနယ် နယ်မြေအတွင်း မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ကြား တိုက်ပွဲ အဆက်မပျက်ဖြစ်ပွားနေပြီး KIA တပ်စခန်း ၂ ခုနောက်ဆုတ်လိုက်ရကြောင်းသိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 7:39 PM0comments
ICRC aid convoy allowed access to Laiza after delay
ICRC aid convoy finally arrived to the KIO-controlled Mai Ja Yang in eastern Kachin state on Feb. 25.
An aid convoy from the International Committee for the Red Cross (ICRC) traveled to territory controlled by the Kachin Independence Organization (KIO) this week and was eventually allowed to visit Laiza the KIO's de facto capital.
Posted by Kachin News Group at 6:55 PM0comments
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက် ရွှေကျင်လုပ်သား ၃၀ ကျော် အာဏာပိုင်များဖမ်းဆီးခံရ
မြစ်ကြီးနားအထက် ဧရာဝတီမြစ် ရွှေကျင်းများ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား ဝိုင်းမော်မြို့လဘန်ကထောင် (Labang Kahtawng) တွင် ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက်ရွှေကျင်နေသော လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်အပါအ၀င် ရွှေလုပ်သား အမျိုးသား ၃၀ ကျော်ကို ဝိုင်းမော်ရဲစခန်းမှ ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by Kachin News Group at 2:52 PM0comments
အစိုးရတပ်များ ကချင်ထိုးစစ် ဆက်လက်ဆင်နေခြင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာဖိအားပေးရန် KWAT တောင်းဆို
Feb 28 မှာ ထိုင်းအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ (KWAT) မှထုတ်ဝေတဲ့ "State Terror in Kachin Hills" အစီရင်ခံစာ
မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကြား ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်သို့ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေသော်လည်း လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရတပ်ဖွဲ့များ၏ စစ်လက်နက်အင်အားနှင့် ရိက္ခာများတိုးချနေပြီး တိုက်ပွဲ ပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်သည့် အလားအလာရှိနေသည့် လုပ်ရပ်အပေါ် နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေး အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ထိုင်းအခြေစိုက် ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ (KWAT) တောင်းဆိုလိုက်သည်။
Posted by Kachin News Group at 2:02 PM0comments
အစိုးရတပ်များ ကချင်ထိုးစစ် ဆက်လက်ဆင်နေခြင်းအပေါ် နိ...
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီမြစ်တလျှောက် ရွှေကျင်လုပ်သား ၃၀ ...
ICRC aid convoy allowed access to Laiza after dela...
၀ိုင်းမော်မြို့နယ် “ဇ” ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ဆေးဝါးလိုအ...
မြစ်ဆုံ ရေကာတာစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း ပြောင...
Burma govt and KIO to meet in China next week, as ...
Army's Kachin offensive continues despite Presiden...
Burma army denies Pangwa airstrikes, says helicopt...
UN's Quintana concerned about situation in Kachin ...
Burma army and KIO clash in Shan state shortly aft...
Burma army continues shelling and looting Kachin s...
Kachin-China timber trade resumes following lull i...
RFA Kachin Language TV Program, 2013 March 4th Wee...
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကချင်...